စီးပွားဖြစ်ဖန်အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Jianda
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် > ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စီးပွားဖြစ်ဖန်ဖန်လုံအိမ်
JIANDA ကုမ္ပဏီသည် Greenhouse ထုတ်ကုန်များကိုသာရောင်းချခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်အားအောင်မြင်အောင်ကူညီခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ခြင်း၊ ပြည်သူများကိုကူညီခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဖြစ်သည်။ JIANDA ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းဈေးကွက်မှအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို BESTCommerce သို့ရောင်းချသည်။ နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့၊ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် 100% အပျိုစင်ကုန်ကြမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်အားပေးမည်
လေဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ သံမဏိအရည်အသွေး၊ အရည်အသွေးမြင့်သောသော့ခတ်နိုင်ခြင်း၊
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
8m / 9.6m / 12m
120mm * 120mm * 3mm
120mm * 60mm * 3.0mm
50mm * 50mm * 2.5mm
အပူပေးစနစ်၊ လေဝင်လေထွက်စနစ်၊ အအေးပေးစနစ်၊ အရိပ်များ၊ ပျိုးပင်ခုံတန်းရှည်၊ အလင်းစနစ်၊
3.Product Feature နှင့်လျှောက်လွှာ
စီးပွားဖြစ်ဖန်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုကြီးမားသောတန်ဆာဆင်ဖန်လုံအိမ်၊ ငါးမွေးမြူရေးဖန်လုံအိမ်၊ ပန်းခြံဥယျာဉ်၊ ပန်းစျေး၊ ဈေးဝယ်စင်တာနှင့်ဂေဟစနစ်စားသောက်ဆိုင်တို့ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စီးပွားဖြစ်ဖန်ဖန်လုံအိမ်သည်အလင်းပေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်တည်ငြိမ်သောတည်ဆောက်ပုံတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အပင်များအတွက်နေရောင်ခြည်အလွန်လိုအပ်သည်။အရိုးစုကိုသံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဂဟေဆော်သောသံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်စီးပွားဖြစ်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်၊ သံမဏိကိုယ်ထည်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူနှင့်အပူချိန်အားဖြင့် ၆၀um ထက်မနည်းသောကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ဖန်လုံအိမ်တည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆက်နွယ်မှုအများစုကိုဝက်အူများသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသည်။စံအရိုးစု၏အာမခံကာလမှာ ၁၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်သက်တမ်းမှာအနှစ် ၂၀ ကျော်ဖြစ်သည်။
ခေါင်မိုးအဖုံးပစ္စည်း: Tempered Glass ကို
ဘေးထွက်အဖုံးပစ္စည်း: Double Layer Hollow Glass
အားသာချက် - ကြီးမားသောနေ့အလင်းရောင်makeရိယာများပြုလုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောထုတ်လွှတ်မှု၊ လှပသောအပြင်အဆင်နှင့်အိမ်တွင်းအလင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
4mm / 5mm Tempered Glass ကို
နွေရာသီအရိပ်၊ မိုးရေ၊ အစိုဓာတ်၊ အအေး၊ ဆောင်းတွင်းနွေရာသီအပူထိန်းသိမ်းခြင်း
ရေပူအပူပေးခြင်း၊ လေပူခြင်း၊ လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်း
ပြင်ပ & အတွင်းပိုင်း shading စနစ်
Electrodynamic အမျိုးအစား, ကွင်းဆက်အမျိုးအစား, interlligent အမျိုးအစား
. The လေဝင်လေထွက်စနစ် is actuated by gear motor and controlled by the rack, pinion and other transmission tubes to make the windows open or closed.
။ Cooling system cooling fan နှင့်အအေးပေးသည့် pad သည်ရေငွေ့ပျံခြင်းနိယာမကို အသုံးပြု၍ အအေးခံခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ စနစ်သည်ရိုးရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊
။ အအေးနှင့်လေဝင်လေထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအတူတကွအသုံးပြုရန်အတွက် pads များနှင့်ပန်ကာများကိုအတူတကွအသုံးပြုကြသည်။ အလူမီနီယံဘောင်သည်အမြင့် ၁၅၀ မီလီမီတာနှင့်အထူ ၁၅ မီလီမီတာ။
. Heating system mainly include boilers and radiators,boilers such as gas boiler,diesel boiler,and biomass boiler;Radiators have Radiating pipe,heating pipe for ရေနံချောင်း system,heating coil fan,gardening heater fan. Besides, the Quilt for thermal insulation used together with heating boiler etc.
. အပြင်ဘက် shading စနစ်။
. Shading စနစ်အတွင်းပိုင်း။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းဖြင့်ဆည်မြောင်းနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာရေသန့်စင်ခြင်းစနစ်သည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုစုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ဤအတောအတွင်းသီးနှံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသည်။ ၂။ အထူးသဖြင့်ရေအရည်အသွေးမကောင်းသောသီးနှံနှင့်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ရှိသည့်forရိယာအတွက်သင့်တော်သည်။ ၃။ အဆင့်မြင့်ကုသမှုကိုဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
MSGS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူအရည်အသွေးကောင်းနှင့်အတူ uti span venlo ဆွန်းဖန်လုံအိမ်
Muti span venlo hollow ဖန်လုံအိမ်ဖန်လုံအိမ်အတွင်းအမြောက်အများကိုကွန်တိန်နာဖြင့်သယ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အချိန်မှန်ရောက်သည်။
Jianda Greenhouse Company မှ Muti span venlo hollow ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်နှင့်စုံစမ်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
ဟုတ်တယ်, we are manufacturer for types of greenhouse for 10 years.
A.ဟုတ်တယ်, English manual with drawing and video shipped together with goods for guiding your installation easily.
hot Tags:: ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းနိမ့်၊ လျှော့စျေး၊
Muti Span Venlo ဆွန်းဖန်လုံအိမ်
Arch အမျိုးအစားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလူပျို Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်
နေရောင်ခြည်လူပျို Span ရုပ်ရှင်ဖန်လုံအိမ်